Published at November 15, 2018 by
– प्रति वर्ग फुट ४ वटा चल्ला हुनेगरी क्षेत्रफल दिने ।
– प्रत्येक चल्लाको बाक्साबाट ४-५ वटा चल्लाको तौल लिने र अभिलेख राख्ने ।
– चल्लालाई खोरमा ल्याउनासाथ तुरुन्त ब्रुडिंग क्षेत्रमा छोडिहाल्ने ताकि चल्लाले छिटो भन्दा छिटो पानि पिउन सकून । छोड्दाखेरि पानीको भाँडा नजिकै लगेर छोड्ने र पानि खान उत्प्रेरित गराउने । चल्लाको चुचो पानीमा डोबेर चल्लालाई पानि खान उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ । कुखुरामा स्वास—प्रस्वास सम्बन्धि समस्या बढी देखिने स्थानमा चल्लाको सुरुको १ देखि २ घण्टाको पानीमा आई.बिए.च. १२० भ्याक्सिन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
– पानीको भाडो (चिक ड्रिङ्कर) को संख्या प्रति ४० चल्ला १ वटा भाडो हुनेगरी मिलाउने । गर्मीयाममा प्रति १०० चल्ला बराबर ३ वटा पानीको भाडो दिने
– चल्लाले पिउने पानीमा इलेक्ट्रोलाईट मिसाउने ।
– पानि पिउन सुरु गरेको २-३ घण्टा पछि मात्र दाना दिने । प्रि- स्टार्टर दाना दिने ।
– दानाको भाँडा (चिक फिडर) को संखा प्रति ४० चल्ला बराबर १ वटा भाडो हुनेगरी मिलाउने ।
– ब्रुडरको नजिकको तापक्रम ९०-९५ डिग्री फरेनहाईट र कोठाको तापक्रम ८०-८५ डिग्री फरेनहाईट हुनुपर्दछ ।
– कुनैपनि हालतमा चल्लालाई स्वच्छ हावा चाहिन्छ । पानि र दाना भन्दापनि महत्वपूर्ण कुरा हो स्वच्छ हावा । आवश्यक तापक्रम कायम रहने गरी दुवैतर्फ माथिको पर्दा खोल्नुपर्द्छ ताकि अधिक भन्दा अधिक मात्रामा हावाको आवत-जावत हुन सकोस् । अत्यधिक ठण्डी मौसममा पनि कम से पर्दाको माथि कम १ फुट खुला रहोस् ।
– दोस्रो, तेस्रो र चौथो दिन दैनिक ५-६ घण्टाको पानीमा डेनागार्ड (Denaguard) ४ ग्राम प्रति १००० चल्लाको दरले वा सोलुटिल (Solutyl) १० ग्राम प्रति १००० चल्लाको दरले वा टाइलोभेट (Tylovet) १ ग्राम प्रति ३ लिटर पानिको दरले ५-६ घण्टाको पानीमा दिने ।
– चल्लालाई रानीखेत विरुद्धको बि-वान (B-1) भ्याक्सिन आँखामा १ थोपा, ५ देखि ७ दिनभित्र दिने। सकभर पाँचौ दिन मै दिने ।
– सोत्तरको गहिराई कमसेकम डेढ इन्च हुनुपर्छ ।
– चल्ला ह्याच भैसकेपछि फार्मसम्म आइपुग्दा केहि समय लाग्ने हुनाले डिहाईड्रेशन भई गाउट रोग देखिन सक्ने अधिक सम्भावना हुन्छ यो समयमा । गाउट रोग साथै फंगल (ढुसिजन्य) इन्फेकशन नहोस् भन्नाको लागि विशेष सावधानी अपनाउने ।
– यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत १६० – १६५ ग्राम हुनुपर्दछ (कब-५०० को हकमा १६७ ग्राम) । दाना खेर नजाओस् भन्ने कुरामा सावधानी अपनाउने । समय-समयमा खोरमा कामदारलाई हिड्ने-डुल्ने गर्न लगाउने ताकि चल्ला दाना खान प्रेरित हुन् । रातिमा दाना खानको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रकाश रहोस् ।
– यति दाना भैसकेपछि हप्ताको अन्त्यमा चल्लाको वजन करिब १८५ ग्राम आउनुपर्दछ (कब-५०० को हकमा पनि १८५ ग्राम) ।
– भि-अक्स (V-Ox) वा वायो-बुस्टर (Bio-Buster) ले एकपटक खोरभित्र छिटेर निसंक्रमण गर्ने ।
– चल्लालाई अलि बढी क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने । प्रति वर्ग फुट २ वटा चल्ला हुनेगरी क्षेत्रफल दिने ।
– १२ औँ दिनसम्म सतप्रतिशत प्रि- स्टार्टर दाना नै दिने । १३ औँ दिन ७५ % प्रि- स्टार्टर र २५ % स्टार्टर दाना मिसाएर दिने । १४ औँ दिन ५० % प्रि- स्टार्टर र ५० % स्टार्टर दाना मिसाएर दिने । तेस्रो हप्ता देखि स्टार्टर दाना खुवाउनको लागि दोस्रो हप्ताको अन्त्यतिर क्रमिक रुपमा प्रि- स्टार्टर दानाको मात्रा घटाउने । एक्कासी परिवर्तन नगर्ने ।
– १२ देखि १४ दिनको बिचमा गम्बोरो बिरुद्धको इन्टरमेडीयट प्लस (IBD Intermediate Plus) भ्याक्सिन आखाँ वा नाक वा मुखको प्वालमा एक -एक थोपा दिने । सकभर १२ औँ दिनमै दिएको राम्रो । मुखको प्वालमा दिँदा उत्साहजनक परिणाम देखिएको छ ।
– यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत ३६० – ३७० ग्राम हुनुपर्दछ (कब-५०० को हकमा ३७५ ग्राम) । समय-समयमा फिडरलाई हल्लाउने ।
– यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औषत तौल लगभग ४५० ग्राम हुनुपर्छ (कब-५०० को हकमा ४६५ ग्राम) । यदि सोभन्दा कम वजन आएमा तुरुन्त के कारणले गर्दा कम आयो भन्ने कुराको खोज तलास गरिहाल्ने । अन्यथा सुधार गर्नको लागि ढिलो हुनसक्छ ।
– भि-अक्स (V-Ox) वा वायो-बुस्टर (Bio-Buster) एकपटक खोरभित्र छिटेर निसंक्रमण गर्ने । जीवित भ्याक्सिन (Live vaccine) दिनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि देखि १२ घण्टा पछिसम्म खोरभित्र निसंक्रमण औसधि प्रयोग नगर्ने । निसंक्रमण औसधिको प्रभावले Live vaccine को सक्रिय तत्व नष्ट हुनसक्छन ।
– १५ औँ दिन ७५% स्टार्टर र २५% प्रि-स्टार्टर दाना दिने । १६ औँ दिनबाट १००% स्टार्टर दाना दिने । दानाको प्रकार एक्कासी परिवर्तन नगरिकन क्रमबद्ध रुपमा गर्ने । दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा बायोलिभ १५ एम एल प्रति सय चल्लाको दरले १२ औँ दिनदेखि १६ औँ दिनसम्म पानीमा चलाउने ।
– २६ औँ दिनसम्म सतप्रतिशत स्टार्टर दाना नै दिने । २७ औँ दिन ७५ % स्टार्टर र २५ % फिनिसर दाना मिसाएर दिने । २८ औँ दिन ५० % स्टार्टर र ५० % फिनिसर दाना मिसाएर दिने । पाचौँ हप्ता देखि स्टार्टर दाना खुवाउनको लागि चौथो हप्ताको अन्त्यतिर क्रमिक रुपमा स्टार्टर दानाको मात्रा घटाउने । एक्कासी परिवर्तन नगर्ने ।
– दानाको भाडा हेर्ने । सबै कुखुरालाई खाने स्थान पुग्ने गरी पर्याप्त छ कि छैन? निश्चित समयको अन्तरालमा फिडर हल्लाउने । यसरी फिडर हल्लाउनाले कुखुरा दाना खान प्रेरित हुन्छ ।
– ब्रुडरको नजिकको तापक्रम ७५-८० डिग्री फरेनहाईट र कोठाको तापक्रम ६५-७० डिग्री फरेनहाईट हुनुपर्दछ ।
– सि.आर.डि., ई. कोलाई, कक्सीडियोसिस् एवम् एसाईटिस (पेटमा पानि जम्मा हुने) नहोस् भन्नाको लागि विशेष सावधानी अपनाउने । उपरोक्त रोगका लक्षण देख्नासाथ तुरुन्त दर्तावाल भेटेरिनरी डाक्टर कहाँ उपचार गर्ने ।
– यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औषत तौल लगभग १४०० ग्राम हुनुपर्छ (कब-५०० को हकमा १५२४ ग्राम) । यदि कम वजन आएमा तुरुन्त के कारणले गर्दा कम आयो भन्ने कुराको खोज तलास गरिहाल्ने ।
– २९ औँ दिन ७५% फिनिसर र २५% स्टार्टर दाना दिने । ३० औँ दिनबाट १००% फिनिसर दाना दिने । दानाको प्रकार एक्कासी परिवर्तन नगरिकन क्रमबद्ध रुपमा गर्ने । दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा बायोलिभ १५ एम एल प्रति सय चल्लाको दरले २६ औँ दिनदेखि ३० औँ दिनसम्म पानीमा चलाउने ।
– दानाको भाडा हेर्ने । सबै कुखुरालाई खाने स्थान पुग्ने गरी पर्याप्त छ कि छैन ? निश्चित समयको अन्तरालमा फिडर हल्लाउने ।
– ब्रुडरको नजिकको तापक्रम ७०-७५ डिग्री फरेनहाईट र कोठाको तापक्रम ६०-६५ डिग्री फरेनहाईट हुनुपर्दछ ।
– सि.आर.डि. र ई. कोलाईको संक्रमण नहोस् भन्नाको लागि विशेष सावधानी अपनाउने ।
– भि-अक्स (V-Ox) वा वायो-बुस्टर (Bio-Buster) जस्ता भाइरुसाइडल औषधिले हप्तामा तीन पटक खोरभित्र छिटेर निसंक्रमण गर्ने ।
– फिनिसर दाना दिने
– सोत्तरलाई यो हप्तामा प्रत्येक दिन पल्टाउने (रेकिङ्ग) गर्ने । सोत्तर जहाँ भिजेको छ त्यसलाई हटाउने र नयाँ सोत्तर थपेर सुख्खा बनाइदिने ।
– कोठाको तापक्रम ६०-६५ डिग्री फरेनहाईट हुनुपर्दछ । यदी कोठाको तापक्रम ५५ डिग्री फरेनहाईट भन्दा कम भएमा कुखुराले अनावश्यक बढी दाना खाएर एफ. सि. आर. खराब हुनसक्छ, यस्तो अवस्था आइपरे भुकारीको प्रयोग गरेर तापक्रम बढाउने ।
– यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत १२३०-१२५० ग्राम हुनुपर्दछ (कब-५०० को हकमा १४३४ ग्राम) ।
– यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औषत तौल लगभग २४०० ग्राम हुनुपर्छ (कब-५०० को हकमा २८५७ ग्राम) । यदि कम वजन आएमा के कारणले गर्दा आयो भन्ने कुराको खोज-तलास गर्ने जुन अर्को लटको लागि शिक्षा हुनसक्दछ, यो लटको लागि भने सुधार गर्ने बेला टरिसकेको हुन्छ ।
७. केहिबेर चल्लाको नजिकै बसेर ध्यान दिने । कोहि सानो र कोहि ठुलो त भैरहेका छैनन् ? यदी यस्तो भएको छ भने कारण पत्ता लगाउने र निराकरण गर्ने । निराकरण गर्नको लागि तौल अनुसार ग्रेडिंग गरी ठुला र सानालाई छुट्टा-छुट्टै बस्ने र दानापानि खाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चल्लालाई सास फेर्ने बेलामा अफ्ठ्यारो भई आवाज निस्कने गरेको त छैन ? यदी छ भने तुरुन्त भेटेरिनरी डाक्टरसँग परामर्श लिएर सोहि मुताविक काम गर्ने । खुट्टा कमजोर त भएको छैन ? यदी भएमा तुरुन्त उपचार गर्ने ।